Archive du 20170529
Fanonganam-panjakana Ho raikitra amin�izay ?
Miala any indray ny fitakiana politika mikendry ny fiaraha-mitantana ny firenena noho ny fiheveran�ireo mpanao politika nivory tetsy Andrainarivo ny faran�ny herinandro teo fa tsy tokony ho ny HVM irery intsony no hitantana ny firenena
Fanendrena masoivoho Tsy mety teraka Ambatobevohoka
Taona iray mahery izao no niketrehan�ny fanjakana Malagasy ireo masoivoho hisolotena an�i Madagasikara any ivelany.
Praiminisitra Mahafaly Manambitamby an�ireo silamo
Nanokatra ny volan�ny Ramadan tetsy amin�ny Moske 67 ha ny sabotsy ireo mpino silamo. Tonga nanotrona teny an-toerana ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Manindry mafy ireo gadra politika fahiny Fampihavanana aloha vao fifidianana
Nanatontosa ny fihaonambe nasionaly ny sabotsy teo teny amin�ny Telozoro Andrefanambohijanahary ny FEDeP (F�d�ration des Ex-D�tenus Politiques de Madagascar).
Fitakiana sendikaly Niharan�ny rombo ny HVM
Ny eo tsy mivaha, ny eo misosoka ihany ! Izay no azo hamaritana ny zava-misy eto amin�ny firenena manoloana ny fitakiana sy ny fitokonana isan-karazany vokatry ny tsy fahaizan�ny HVM mitantana ny firenena.
Taratasin�i Jean Manazatra hangataka
Miarahaba ry Jean a ! Tena henjana aloha ity stratejia anareo ity sady tsy mety misy maharaka mihitsy na dia fika efa tranainy aza e ! Miaiky koa aho izay !
Faritra Boeny Nitokana fotodrafitrasa 3 ny praiministra Solonandrasana
Nidina ifotony tany amin�ny renivohitry ny faritra Boeny ny delegasiona notarihin�ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier notronin�ireo minisi-panajakana maromaro ny zoma 26 mey 2017.
Kolikoly avo lenta Saika re matetika ny ao amin�ny atitany
Ry zareo avy eo anivon�ny vovonana politika dinika ho fanavotam-pirenena (DFP) no tena nanitrika hatramin�ny fiandohan�ny taona fa ao amin�ny minisiteran�ny atitany ao no tena fositra amin�ny
True Direction Life Hamoaka ny rakikirany faharoa
Hamoaka ny rakikirany vaovao faharoa ny tarika TDL ( True Direction Life). Ny 4 jona ho avy izao, alahadin�ny pentekosta no hamoahana amim-pomba ofisialy izany etsy Antsahamanitra mandritra ilay fampisehoana goavambe izay hotanterahin�izy ireo eto an-drenivohitra.
Faha 50-taonan�ny Fjkm Hanomboka ny 18 aogositra any Antsiranana
Tontosa omaly tolakandro teny amin�ny Fjkm Tranovato Faravohitra ny fanompoam-pivavahana fametrahana ara-pombam-piangonana ny komitin�ny jaobily ho an�ny Fjkm.
Aleo manonofy aloha
Mba fahalalam-pomba angamba no mahatonga ny olona sasany mitoraka voninkazo ny fitondrana HVM misy eto Madagasikara amin�izao fotoana, fa raha hoe ny asa atao sy ny fomba fitantanana ary ny fanolorana vahaolana mahomby dia ratsy dia ratsy ny naoty
Sekoly ambony GSI Namoaka mpianatra 200 mianadahy
Namoaka mpianatra 200 mianadahy ny zoma lasa teo ny sekoly ambony GSI etsy Antaninarenina.
CNEMD Ampefiloha Enim-bolana tsy nandray karama ireo mpampianatra mozika
Ivontoerana iray mampianatra momba ny mozika ny CNEMD etsy Ampefiloha, rantsana iray eo anivon�ny minisiteran�ny kolontsaina sy ny vakoka.
Hira ho an�i Neny tetsy amin�ny CCESCA Latsa-dranomaso i Rolland Raoelison
Tao anatin�ilay fampisehoana � Hira kanto ho an�i Neny � niangalian�i Rija Ramanantoanina sy Mahery, Fanja, Faniry Raoelison, ny tarika Ny Nanahary ary ny tarika M.R.
Taksibe iray laharana 194 mampitohy an�i Mausol�e sy Andranomena ny sabotsy teo no nibahana mpandeha tsy hiditra tao anaty fiara. Ilay mpanampin�ny mpamily no nikomy.